Sare & Cunto; Sidee loo xalliyaa Spam si guul leh?
Spam waa arrin guud oo la kulma dadka isticmaala internetka. Caadi ahaan, farriimaha spam ayaa ka yimiddadka qaba ulajeeddooyin xanuun sida phishing iyo hacking. Emaarada spam waxay ku jiraan lifaaqyo, URL ama talooyin kale oo taleefan-ku-wadi-gal ah oo awoodi karadhibanaha u keeno macluumaad qiimo leh oo ku saabsan spamka. Spam waxay qaadataa malaayiin website ah iyo sidoo kale macluumaad kale oo shakhsi ah.Ganacsi kasta e-ganacsi, website-ka ama internetka waa inuu ka fogaadaa spam.
Waxaad ka heli kartaa spam adigoo isticmaalaya talooyinka iyo ficilada, oo ay bixiso Jack Miller,Maareeyaha Guusha Macaamiisha Sare Sare ,sida:
Ilaali cinwaanka emailkaaga - cottonseed temperature cables.
Maarshaha dahabiga ah waa liiska cinwaanada emailka. Inta badan spamerku waxay diiradda saaraan ururintaliiska cinwaanada emailka ah kuwaas oo ay soo diraan emails spam mass. Weerarrada caadiga ah ee spam kuwaas oo ku yimaada qaabkan waxaa ka mid ah kuwa ka socda bogagga shabakada ah.Haysashada nabadgelyadaada emailka ayaa noqon karta fikrad wanaagsan. Dadka leh websaydh ama dad leh hawl firfircoon online, abuuraya email badanxisaabiyeyaasha si ay u qabtaan hawlaha kala duwan waxay noqon karaan fikrad qurux badan. Natiijada, weerarrada spam badankood waxay kaliya bartilmaameed u diraan hal email oo aan dhamaantood.
Isticmaal faylasha spam.
Waxaa jira sifooyin spam oo kaa ilaalin kara sanduuqaaga farriimaha gaarka ahnooca ama diraha. Nidaamyada maareynta maadooyinka intooda badani waxay leeyihiin sifooyinka spam kaas oo kaa ilaalin kara emailada caadiga ah ee spam. Bogagga internetka sida Outlookiyo Gmail waxay leeyihiin sifooyinka spam kuwaas oo haysta heer sare oo waxtarka ah oo bilaash ah. Natiijo ahaan, waxaad ka faa'iideysan kartaa adeegyadooda anti-spam.
Ha ka jawaabin spam.
Spammers waxay isticmaali karaan noocyada kala duwan ee khiyaamada si aad u gujiso xiriirin emailkooda ama farriintooda.Qaar ka mid ah siyaabaha caadiga ah waxaa ka mid ah badhanka oo soo bandhigaya macluumaadka sida "halkan si sax ah u riix si aad u joojiso". Taabashada wax kasta waxay xaqiijineysaaspammer in cinwaanka emailka uu yahay mid sax ah, oo isticmaaluhu isticmaalaa cinwaanka emailka. Waxaa intaa dheer, waxay ku jiri kartaa isku xirka shabakada khatarta leh,taasoo keeni karta dhibanaha.
Ha u furin xidhka
Sidoo kale ma fiicna in la furo lifaaqyada ku jira emaillada spam. Lifaaqyadani waxay noqon karaanwaxaa ku jira fayras sida Trojans. Xakamaynta iyo dirxiga Tani waxay bartilmaameed u tahay in lagu faafiyo kombuyuutarka isticmaalaha. Waxay soo aruurin karaan macluumaad qiimo lehsida browserka erayada u gudbiyo ama xitaa la qabsado kombiyuutaro badan oo gaar ah. Xayeysi kasta oo ku jira emails emaillada waa in ay halkaas joogaan. Si kastaba ha ahaatee, tirtirwixii spam email ah oo degdeg ah.
Haddii aad la kulanto email aad hubto inuu yahay spam, waa inaad calaamad u noqotaa sida spam. TaniCabbiraadu waxay ka dhigeysaa inaad ka qaybgasho ololaha erey-bixinta ereyga, samaynta tirintaada kaalmada. Sidaa darteed, kor u qaado digniinta ka hor baxsandhibaatada si loo badbaadiyo qof kale.
Spam wuxuu ka mid yahay dadka isticmaala internetka maalin kasta. Dad badan ayaa ku dhacaya spam sidaqoryaha ama shakhsiyaadka leh emailada leh emails infakshanka. Xaaladaha intooda badan, spammers waxay bartilmaameedsadaan bogagga shabakadaha, maamulayaasha, ama xisaabaadka isticmaalaha halkaaMacluumaadka sida macluumaadka kaarka deynta creditka macmiilka. Ka fogaanshaha spam waa muhiim. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin xirfado wanaagsan si ay u ilaaliyaan spam. Tilmaamaha qaarkoodsiyaabaha ugu fiican ee looga hortagi karo spam waxay ku jirtaa tilmaamahan. Waxaa intaa dheer, waxaa jira habab kale oo cajiib ah sida wax looga qabto emailka spam. Adigu ma dhici kartidspam tan iyo markii aad nadiifin kartid hadafyadaada iyo bartilmaameedkaaga.